တရုတ်ပြည် မှဗိုင်းရပ်စ် ဟာ လူလူ ချင်းကူးစက်နိုင် တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေ အထူးသတိထား ဖို့ လိုလာပါပြီ – Shwewiki.com
တ ရုတ်နိုင်ငံမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်…တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း သုတေသနပြုလုပ်မှုတွေ အပြင်းအထန်ပြုလုပ်ချက်ရှိပါတယ်……သုတေသနပြု စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ တရုတ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆန်းတစ်မျိုးကနေ ဖြစ်ပွားတဲ့ အဆိုပါ နမိုးနီးယားရောဂါသစ်တစ်မျိုးဟာ လူ လူခြင်း ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ အသိပေးခဲ့ပါတယ်…..
ခုလိုပြောလာရတာကလည်း ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လေးဦးမြောက်လူ သေဆုံးကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပြီးမှာ ဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….
ဒါပေမယ့် အဆိုပါရောဂါဆန်းဟာ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ SARS ရောဂါ တစ်ကျော့ပြန်လာနိုင်မဲ့ အန္တရာယ်မျိုး မရှိဘူးလို့ ကျောင်နန်ရှန့်က ဆိုခဲ့ပါတယ်…
ခုလို ရောဂါဆန်းဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်နှံ့ခဲ့တာဟာလည်း အစောပိုင်းအခြေအနေကသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံက ကောင်းစွာစောင့်ကြည့်နေသလို ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ရောဂါခြေချုပ်စနစ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်…
တရုတ်နိုင်ငံအပြင် တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်းနဲ့ ဂျပန်တို့မှာလည်း ကူးစက်ခံရသူ လေးဦး ရှိထားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ကမ္ဘာ့လေဆိပ်တွေမှာလည်း တရုတ် ဝူဟန်မြို့ကလာခဲ့တဲ့ တရုတ်ခရီးသည်တွေကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်….
တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အတည်ပြုချက်အရ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၂၁၇ ဦး ရှိရာမှာ ဝူဟန်မြို့မှာတင် ၁၉၈ ဦး ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူလူချင်း ကူးစက်တတ်တဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဆန်းကြီး မိမိတို့ဒေသဆီ ရောက်မလာစေဖို့ သတိထားကြဖို့ နဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်နော်…
တ ရုတျနိုငျငံမှာ ထူးဆနျးတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတဈမြိုးဖွဈပှားနပေါတယျ…တာဝနျရှိသူတှကေလညျး အဆိုပါ ဗိုငျးရပျဈအကွောငျး သုတသေနပွုလုပျမှုတှေ အပွငျးအထနျပွုလုပျခကျြရှိပါတယျ……သုတသေနပွု စုံစမျးစဈဆေးနတေဲ့ တရုတျတာဝနျရှိသူတဈဦးကတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးဆနျးတဈမြိုးကနေ ဖွဈပှားတဲ့ အဆိုပါ နမိုးနီးယားရောဂါသဈတဈမြိုးဟာ လူ လူခွငျး ကူးစကျနိုငျတယျလို့ အသိပေးခဲ့ပါတယျ…..
ခုလိုပွောလာရတာကလညျး ဒီ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ လေးဦးမွောကျလူ သဆေုံးကွောငျး သတငျးထုတျပွနျအပွီးမှာ ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ….
ဒါပမေယျ့ အဆိုပါရောဂါဆနျးဟာ ပွငျးထနျအဆုတျရောငျရောဂါ SARS ရောဂါ တဈကြော့ပွနျလာနိုငျမဲ့ အန်တရာယျမြိုး မရှိဘူးလို့ ကြောငျနနျရှနျ့က ဆိုခဲ့ပါတယျ…
ခုလို ရောဂါဆနျးဗိုငျးရပျဈ ပွနျ့နှံ့ခဲ့တာဟာလညျး အစောပိုငျးအခွအေနကေသာဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ တရုတျနိုငျငံက ကောငျးစှာစောငျ့ကွညျ့နသေလို ရောဂါကို ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ ရောဂါခွခြေုပျစနဈကိုလညျး ကငျြ့သုံးနပွေီဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျလကျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ…
တရုတျနိုငျငံအပွငျ တောငျကိုရီးယား၊ ထိုငျးနဲ့ ဂပြနျတို့မှာလညျး ကူးစကျခံရသူ လေးဦး ရှိထားပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့လဆေိပျတှမှောလညျး တရုတျ ဝူဟနျမွို့ကလာခဲ့တဲ့ တရုတျခရီးသညျတှကေို ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျလကျြရှိပါတယျ….
တရုတျတာဝနျရှိသူတှရေဲ့ အတညျပွုခကျြအရ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူပေါငျး ၂၁၇ ဦး ရှိရာမှာ ဝူဟနျမွို့မှာတငျ ၁၉၈ ဦး ရှိကွောငျး ထုတျပွနျထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လူလူခငျြး ကူးစကျတတျတဲ့ ဒီဗိုငျးရပျဈဆနျးကွီး မိမိတို့ဒသေဆီ ရောကျမလာစဖေို့ သတိထားကွဖို့ နဲ့ စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျဖို့ လိုပါတယျနျော…